1.Ny extruder kambana kambana namboarina Optimally dia afaka mamokatra vovoka resinina PVB sy fanodinana sarimihetsika PVB amin'ny lafiny rehetra.
2.Ny rafitra fikirakirana fitaovana mandeha ho azy tanteraka, ny rafitra fampitaovana akora tena mandeha ho azy.
3.Roll mamorona, mamorona rano, mamolavola embossing membrane, fomba telo mamorona hamaly ny filan'ny mpanjifa samihafa.
4.Automatika mihodina rivotra.
5. Tetikasa famadihana.
Ny vera voarary dia vita amin'ny sandwiching amin'ny polyvinyl butyral (PVB) eo anelanelan'ny vera roa. Ny fitaratra sy ny PVB dia voaisy tombo-kase amin'ny andiana tsindry faneriterena ary avy eo hafanaina. Io fitambaran'ny tsindry sy hafanana simika sy mekanika io dia mampamatotra ny PVB amin'ny vera.
Ny fatorana mekanika dia miseho amin'ny alàlan'ny fametahana ny PVB, raha ny fatorana simika kosa dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fatorana hidrôzenina ny PVB amin'ny vera. Io sosona PVB natsofoka io no ahafahan'ny fitaratra mandray ny angovo mandritra ny fiantraikany ary manome ny fanoherana ny fitaratra amin'ny fidirana avy amin'ireo projectile manidina. Izy io koa dia mihodina hatramin'ny 95 isan-jaton'ny taratra ultraviolet (UV) avy amin'ny masoandro [loharano: Reuters]. Ny vera voalamina dia mety vaky ary totofana, fa hijanona tsy ho simba izy io noho ny fatorana simika amin'ny PVB.
Karazana Max.productions sakany (mm) Vokatry ny vokatra (mm) Output (kg / ora) Hafainganana ambony Max (m / min)
Output lehibe, fanjifana angovo ambany, automatique avo lenta.
Ny tsipika famokarana sarimihetsika PVB dia mizara roa: ny iray karazana dia dingana maina, antsoina koa hoe fomba fanao amin'ny fizotrany, amin'ny alàlan'ny fitrandrahana sarimihetsika mihetsiketsika, fitsangatsanganana stereotypes miolakolaka eny amin'ny rivotra, ny iray kosa dia dingana mando, antsoina koa hoe sambo rano, mamelatra sarimihetsika extrusion ny sarimihetsika amin'ny alàlan'ny stereotypes fampangatsiahana tanky, maina maina aorian'ny fihodinana, karazana dingana roa misy fahasamihafana eo amin'ny fitaovana, miovaova be ihany koa ny vidiny. Ny milina lehibe koa dia afaka mampiasa extruder visy tokana na extruder kambana mifanila arakaraka ny filàna sy ny akora samihafa
Teo aloha: Extruder Screw Twin avy amin'ny Lab
Extruder Screw Twin avy amin'ny Lab